Galaxy S10 Series အတွက် အလန်းစား Wallpapers များ စုစည်းမှု – MyTech Myanmar
Galaxy S10 Series အတွက် အလန်းစား Wallpapers များ စုစည်းမှု
Samsung Galaxy S10, S10 Plus နဲ့ S10e တို့ဟာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့အတူ အသစ် အသစ်သော နည်းပညာတွေကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင် ရေပန်းစားပြီး လူကြိုက်များလျှက် ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Galaxy S10 Series မှာ သိသိသာသာပြောင်းလဲလာတဲ့ အရာကတော့ Front-Facing Camera တွေအတွက် Display အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ Infinity-O Display ဒီဇိုင်းပါ။
Infinity-O Display ဒီဇိုင်းဟာ Notch တွေထက် Screen-to-body Ratio ပိုများစေသလို အမြင်အားဖြင့်လည်း တင့်တယ်လှပစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Display ထဲမှာ အမည်းပေါက်ကြီး ပါနေတာက ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း Samsung က သူတို့ရဲ့ Official Wallpapers တွေမှာ Selfie Camera အပေါက်နေရာတွေကို မသိသာရလေအောင် အမည်းရောင် ရောစပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတဲ့ လူတွေကတော့ Samsung Galaxy S10 Series ရဲ့ Selfie Camera အပေါက်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် Wallpapers တွေကို ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။
Samsung Galaxy S10 Series နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် Wallpapers တွေ အမြောက်အများရှိပေမယ့် အလန်းဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ Wallpapers တွေကို ကျွန်တော်တို့ MyTech Myanmar ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Donald Trump, Vladimir Putin and Kim Jong-un
2. Wall-E Eyes:
3. For those switching from an iPhone:
5. Big Hero 6:
6. Death Star
Galaxy S10 Series အတှကျ အလနျးစား Wallpapers မြား စုစညျးမှု
Samsung Galaxy S10, S10 Plus နဲ့ S10e တို့ဟာ ဆနျးသဈတီထှငျမှုတှနေဲ့အတူ အသဈ အသဈသော နညျးပညာတှကေို သယျဆောငျလာတဲ့ စမတျဖုနျးတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိ စမတျဖုနျးစြေးကှကျထဲမှာဆိုရငျ ရပေနျးစားပွီး လူကွိုကျမြားလြှကျ ရှိပါတယျ။ အဆိုပါ Galaxy S10 Series မှာ သိသိသာသာပွောငျးလဲလာတဲ့ အရာကတော့ Front-facing Camera တှအေတှကျ Display အပေါကျဖောကျထားတဲ့ Infinity-O Display ဒီဇိုငျးပါ။
Infinity-O Display ဒီဇိုငျးဟာ Notch တှထေကျ Screen-to-body ratio ပိုမြားစသေလို အမွငျအားဖွငျ့လညျး တငျ့တယျလှပစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Display ထဲမှာ အမညျးပေါကျကွီး ပါနတောက ဘယျလိုမှ ကွညျ့လို့ မကောငျးပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး Samsung က သူတို့ရဲ့ Official Wallpapers တှမှော Selfie Camera အပေါကျနရောတှကေို မသိသာရလအေောငျ အမညျးရောငျ ရောစပျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အနယျနယျ အရပျရပျက စိတျကူးစိတျသနျးကောငျးတဲ့ လူတှကေတော့ Samsung Galaxy S10 Series ရဲ့ Selfie Camera အပေါကျတှနေဲ့ လိုကျဖကျမယျ့ Wallpapers တှကေို ဖနျတီးလိုကျပါတယျ။
Samsung Galaxy S10 Series နဲ့ လိုကျဖကျမယျ့ Wallpapers တှေ အမွောကျအမြားရှိပမေယျ့ အလနျးဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ Wallpapers တှကေို ကြှနျတျောတို့ MyTech Myanmar ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
MyTech Myanmar2019-03-10T19:31:35+06:30March 10th, 2019|Mobile Phones, News, Samsung, Tips & Stories|